Orinasa sy mpanamboatra Pack Ice Ice postpartum | Huanyi
Kitapo gel fanampiana ny fanaintainan'ny hemorrhoid hemorrhoid
29.5 * 7.5cm, 220g, tanany malefaka azo sasana miaraka amina fonosana vakana gel azo ampiasaina indray, tsara indrindra aorian'ny fanamaivanana ny fanaintainana
Ny fitsaboana mangatsiaka dia mampihena ny fivontosana sy ny mangidihidy, manome fanamaivanana eo noho eo. Izany dia mampiroborobo ny fanasitranana amin'ny fiterahana, ny triatra amin'ny fivaviana ary ny zaitra, ny fandidiana, ny hemoroidra, ny rà, ny aretin-lebona, ny trauma avy amin'ny savoka, ny fanesorana ny volo tamin'ny laser, na ny ratra ara-panatanjahantena, ankoatry ny hafa.
Ny orinasanay dia afaka manamboatra ny napetraka ho anao, ohatra, fonosana volo 2Xgel sy tanan'akanjo 3X, na azonao atao ny manangona fonosana gel 1X amin'ny tanany 2X, ho an'ny fampiasana aina sy tsy miovaova.
Ny fonosana gel dia vita amin'ny sarimihetsika kilasy ara-pitsaboana tsy misy poizina ary mijanona mora milamina sy malefaka rehefa mivaingana, manome fampiononana bebe kokoa noho ny fonosana gilasy sy fonosana gilasy any amin'ny hopitaly.
Aleo atsipy ao anaty harona hopitaly izy ireo.
Azo ampiasaina amin'ny fanamaivanana mampitony saika ny faritra amin'ny vatana misy mangana, mamaivay, tapaka kely ary may, maharary ny hozatra ary henjana, mitombo fanaintainana, tazo, ary aorian'ny fikarakaran'ny masoandro. Afaka mifandimby fitsaboana hafanana sy hatsiaka. Apetaho anaty vata fampangatsiahana na frizera fotsiny mandra-pahatongan'ny maripana ilaina amin'ny vokatra fonosana mangatsiaka / ranomandry. Ho an'ny vokatra fonosana mafana, apetraho ao anaty microwave mandritra ny fihenan-tsakafo 25 segondra mandra-pahatongan'ny mari-pana tadiavina.
Nisy olona ve nampiasa ireo postpartum ireo tamin'ny lambam-pandriana? Experience?
Faly be aho fa nividy azy ireo iray volana teo aloha satria lasa hemmorhoids aho ary nila izany mba hanamaivanana ny fanaintainana noho izany na dia mbola tsy niteraka aza. Ireo dia mihamangatsiaka tsara ary malama rehefa avoakao, fa tsy henjana sy mangatsiaka na mafy.
TIA ity vokatra ity! Nody avy tany amin'ny hopitaly niaraka tamin'ny zazakely vao teraka. Reraka ny diplaoma faharoa ary rehefa nody aho dia tsy niomana mihitsy. Nanafatra azy ireo aho satria ny fonosana ranomandry nalefan'ny hopitaly nody dia namoaka eraky ny pad mahazatra. Napetrako tao anaty vata fampangatsiahana ireo GentlePacks telo ary nihena haingana izy ireo. Napetrako tao anaty tanany azo nosasana izy ireo ary napetrako teo ivelan'ny akanjo anatiny ary manamaivana ny fanaintainana sy ny fivontosana izany.
Previous: Fonosana ranomandry
Manaraka: Fehin-kibo miverina miaraka amin'ny kitapo gilasy
Fonosana ranomandry postpartum tsara indrindra
Pads ranomandry aorian'ny nahaterahany
Ice Packs Ho an'ny Engorgement
Pads ranomandry ho an'ny aorian'ny fitondrana vohoka
Kitapo mangatsiaka Perineal
Paosy Ice Ice Birth
Fonosana mangatsiaka aorian'ny fiterahana